Dunida oo iyada oo duray dilaa ah la dagaallamaysa misna wajahaysa DAGAAL caalami ah (Shiinaha oo isku ballaarinaya marin muhim ah) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Dunida oo iyada oo duray dilaa ah la dagaallamaysa misna wajahaysa DAGAAL...
Dunida oo iyada oo duray dilaa ah la dagaallamaysa misna wajahaysa DAGAAL caalami ah (Shiinaha oo isku ballaarinaya marin muhim ah)
(Beijing) 10 Maajo 2020 – Dalalka Galbeedka ayaa Shiinaha ku eedaynaya inuu ka faa’iidaysanayo jeer uu caalamkii la jiifo cudurka Covid-19 oo uu isagu haatan ka kacay, si uu caalamka ugu muujiyo cududdiisa millateri.
Shiinaha ayaa la sheegay inuu isku fidiyey dhul ay baaxaddiisu dhan tahay 2 milyan oo mayl oo jibbaaran oo ku teedsan Badda Koonfurta Shiinaha (South China Sea).
MW Maraykanka ee Donald Trump ayaa sheegay inuu si qoto dheer uga walaacsan yahay baahida aan la baanan karin ee ay Beijing u qabto inay dhul cusub qabsato, iyadoo ay Washington halkaa u dirtay 3 markab dagaal.
Shiinaha ayay Galbeedku ku eedaynayaan inuu iska indha tirayo xeerka caalamiga ah isagoo ciidamaynaya jasiirado iyo edegga kalluunka (reefs), si uu halkaa shidaal iyo macaadin uga baarto, isla markaana uu aaggaasi uga dhisto wershado nukliyeer.
Khubarada u dhuun daloosha arrimaha caalamiga ah ayaa xitaa saadisay in haddii uu dhacayo dagaal u dhexeeya Maraykan, Shiine iyo Ruush uu ka dillaaci doono South China Sea.
Wasiirka Gaashaandhigga Shiinaha, Jeneraal Wei Fenghe, ayaa sheegay in dalkiisu ‘aanu waxba reeban doonin’ haddii uu bilowdo dagaal dhexmaraya isaga iyo Maraykanka.
Arrintan Badda Koonfurta Shiinaha ayaa sidoo kale walaacinaysa dersaanta Malaysia, Philippines, Vietnam, Taiwan iyo Brunei oo biyahaa qayb ku wada leh.
Badda South China Sea ayaa asaasi u ah isu socodka shixnadaha iyo dhaqaalaha caalamka, iyadoo ay halkaa maraan maraakiib ku shixnadan hanti ku kacaysa £3.4 tarilyan oo gini sanadkii.
Tusaale ahaan, 12% ka mid ah ganacsiga ay Britain dhoofiso ee badda mara – oo qiyaastii ku kacaya £97 bilyan oo gini sanadkii – wuxuu ka gudbaa halkan.
Previous articleSaxaafadda Turkiga oo ku ”xarragoota” sawirka gargaarka uu Turkigu gaarsiiyey Somalia (Maxaa dhacay?)
Next articleCaqabad soo wajahdey soo noqoshada tababarka kooxaha EPL (Kulan berri loo ballansan yahay & waxa dhacay?)